other | Rochak Khabar
यसरि गर्नुहोस भोट 6
पाल्पा का युबा जस्ले बीस नझारेको सर्प लाई अाफ्नो सरीर मा टोकाउछन हेरौ डरलाग्दो भीडीयो
बिदेशी च्यानलमा मात्रै देख्नुभएको थियो तर आज हेर्नुहोस नेपालको पाल्पा जिल्लामा बस्ने युवक सागर पाण्डेको यो चमत्कार जस्ले आफ्नै घरमा थुप्रै सर्पहरु पालेर राखेका छन् र बिष नझारेको सर्पलाई यसरी आफ्नो शरीरमा टोकाउछन !!!!! पत्यार लागेन ! एकचोटी आफै हेर्नुहोस ध...
5 Dec, 12:36 PM
हेर्नुहोस् पुरानो सिडीबाट यसरी निकाल्‍न सकिन्छ चाँदी ! भिडियो सहित सूचना प्रविधो प्रयोग र पहुँचले अहिले सिडी थन्को लाग्‍दै गएको छ।
तर धेरै ठाउँमा सिडिको उपयोग पनि निक्‍कै नै भएको छ। घरमा पनि सिडीको चक्काहरु धेरै राखिएका हुन्छन्।
तर अलिकति स्क्याच भएमा हामी त्यतिकै फालिदिन्छौ। के थाहा त्यसमा चाँदी लुकेको हुन्छ।
3 Dec, 03:50 AM
परस्त्रीसँग सल्किने लोग्नेलाई यसरी दिइन् पत्नीले सजाय (भिडियो सहित)
चीनमा एकजना पुरुषलाई आफ्नी पत्नीको आँखा छलेर अर्कै महिलासँग सल्किनु निकै महंगो सावित भएको छ । परस्त्रीसँग सल्किने लोग्नेलाई उनकी पत्नीले गतिलो सबक सिकाइन् ।
26 Nov, 03:20 AM
११ वर्षीय बालिकाको जंगली जनावर जस्तै गरी मुखैभरी रौँ आएपछि :: भिडियो हेर्नुहोस ११ वर्षीय बालिकाको जंगली जनावर जस्तै गरी मुखैभरी रौँ आएपछि :: भिडियो हेर्नुहोस 0
16 Nov, 12:22 PM
हेर्नुहोस् अचम्मै बनाउने ५० ट्याटु (भिडियोसहित)
आजभोलीका युवा पुष्तामा ट्याटु बनाउने फेशनले जरा गाडेको छ । बिशेसगरी हात, कम्मर, गर्धन र बक्षस्थलमा ट्याटु खोपिने गरिन्छ । तर आजभोली ट्याटु पनि अनौठो अनौठो ठाँउमा खोपेर सबैको नजर तन्ने प्रयत्नमा अगाडि देखिएका छन् युवापुष्ता । यहाँ केहि यस्तै ट्याटु देखाईएक...
7 Nov, 03:06 AM
५० हजार डलर कमाएको किमको सेक्स टेप, जसलाई ९ करोड ३ लाख ले हेरीसके (भिडियो)
एजेन्सी । हलीउड मोडल तथा टेलिभिजन स्टार किम कार्दाशिनको सेक्स भिडियोको चर्चा अहिले पनि उसतै छ । जुन अहिले सम्म सबै भन्दा बढी हेरिने सेक्स भिडियो अन्र्तगत पर्छ ।
जसलाई अहिलेसम्म किमको भिडियो ९ करोड ३ लाख भन्दा बढीले हेरेका छन् । सेक्स टेपले अहिले सम्म ५०...
प्यारी दिदीलाई पर्देशी भाइको मार्मिक चिठ्ठी,मलाई माफ गर मेरी दिदी यसपालिको तिहारमा पनि आउन सकिनँ प्यारी दिदी अर्थोक केहि गर्न नपाए पनि सुदुर देश मा बसेर भए पनि तिमीलाई निकै सम्झी रहेको छु ............
23 Oct, 02:39 AM
तपाइको मोबाइल धेरै ह्यांग हुने समस्या छ ? अब आफैं बन्नुस् मोबाइल मेकानिक
यसरी गर्नुहोस् जुनसुकै मोबाइल सित्तैमा रिबुट सजिलो तरिका 0
15 Oct, 02:23 AM
सेक्स गर्नु भन्दा अघि खानै नहुने ६ कुराहरु जानी राखौ
13 Oct, 01:33 AM
बलिउडमा थ्रीसम फिल्म, अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बोल्ड ट्रेलर सार्वजनिक
फिल्ममा राजबीर सिंह, दिव्या सिंह, अक्षय रंगशाही र अनुज शर्माको मुख्य भूमिका रहेको छ ।
बलिउडको पहिलो थ्रीसम फिल्मको ट्रेलर रिलिज भएको छ । ‘इश्क जुनून’ नामको सो फिल्मको ट्रेलर बोल्ड सीनले भरिएको देखिएको छ ।
ट्रेलरमा एकै युवतीको दुई युवकसँग रोमान्स गरेको द...
6 Oct, 03:07 AM
सायद तपाईले पण्डित वा ज्योतिषिलाई हात देखाएर चिना देखाएर आफ्नो भविष्य धेरै पटक देखाउनु भएको छ हो। तर के तपाईले कहिल्यै सुन्नु भएको छ की महिलाको स्तन छोएर पनि कही भविष्य हेरिन्छ?
2 Oct, 12:37 PM
यस्तो थियो दरबार हत्याकाण्ड'
संसारमा कही पनि सच्चा प्रेम माथि यस्तो धोका हुँदैन । वास्तवमा यो नैं एउटा ग्रायन्ड डिजाइन् थियो । किनकि एक अनलाइन्मा उनले मलाई रानी हुन इच्छा नैं थिएन भनेर बोलेको प्रकाशित कुरा पढन पाइएको थियो ।
27 Sep, 04:38 AM
भारतीय टेलिभिजनको रियालिटी शोमा नेपाली टोलीको फेरी आर्को तहल्का हेर्नुहोस भिडियो
25 Sep, 02:55 AM